USA: Cunaqabateyn la Saarayo Cidda Faragalisa Doorashada - Worldnews.com
USA: Cunaqabateyn la Saarayo Cidda Faragalisa Doorashada
Madaxweyne Trump ayaa Arbacadii shalay saxeexay wareegto madaxweyne oo ogolaanaysa cunaqabateyn toos ah oo lagula beegsanayo hay’adaha iyo dadka loo arko inay doorashada Maraykanka faragashadeen, ama ha weeraraan kaabayaasha doorshada dalka ama ha adeegsadeen borobogaando ay wax ku jahwareerinayaan. ...
Iran oo Cunaqabateyn Saartay Shaqsiyaad iyo Shirkado Mareykan Ah
Iran ayaa maanta ku dhawaaqday qorshe ay cunaqabateyn ku saartay sagaal shirkado iyo shaqsiyaad Mareykan ah, taasi oo ay uga jawaabeyso wax ay ugu yeertay go’aan “Sharci...
Madaxweynaha Venezuela, Nicolas Maduro, ayaa gaashaanka u daruuray cunaqabateynta uu Mareykanku ku soo rogay saddex iyo toban qof oo ka mid ah saraakiisha ugu sarsareysa...
Gareowe Online 2017-07-27
Mareykanka oo cunaqabateyn ku soo rogay Venezuela
Trump oo cambaareeyay Kuriyada Waqooyi ka dib markii uu arday dhintay
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa Kuuriyada Waqooyi ugu yeeray "dilaa arxan daran" ka dib markii uu dhintay arday Maraykanka u dhashay oo halkaas ku xirnaa in...
Madaxweyne Donald Trump ayaa markale ka digay in uu billaaban karo dagaal wayn oo lala galo Kuuriya Waqooyi kaas oo salka ku haya hubka nukliyeerka ah. Trump oo la hadlayay...
Dowlada Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in cunaqabateyn dhaqaale ay kusoo rogeyso dowlada madaxweyne Nicolas Maduro ee dalka Venezuela. Dowlada dalkaasi ayaa lagu eedeeyay...
Dowlada Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in cunaqabateyn dhaqaale ay kusoo rogeyso dowlada madaxweyne Nicolas Maduro ee dalka Venezuela. Dowlada dalkaasi ayaa lagu eedeeyay inay ku dhaqaaqday xadgudubyo ka dhan xuquuqda aadanaha iyo dimoqraadiyada. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa saxiixay dikreeto madaxweyne oo lagu mamnuucayo in lala macaamilo shirkadaha ganacsiga...
Wareysi: Wareegtada Madaxweyne Trump
Madaxweyne Trump ayaa Arbacadii shalay soo saaray wareegto uu ku joojinayo go'aan uu isagu horay u soo saaray, kaas oo qaxootiga qaangaarka ah lagaga horjoogsanayo inay Maraykanka soo galaan, caruurtoodana laga reebayo si loo xanaaneeyo. ......
Mareykanka oo sheegay inuu cunaqabateyn kusoo rogayo Turkiga
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay cunaqabateyn kusoo rogeyso dalka Turkiga oo xubin ka ah gashaanbuurta NATO. Madaxweynaha Turkiga Rajab Teyib Erdogan ayaa si kulul u cambaareeyay hadalka Mareykanka ee ah inay cunaqabateynayaan dalkiisa. Arrintan ayaa timid kadib markii maxkamad ku taala dalka Turkiga ay diiday inay sii deyso baadari Mareykan ah oo lagu magacaabo...
Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegaysa in qorshaheeda afar gantaal ay ku ridayso meel ku dhaw dhulka Maraykanka ee Guam uu sida ugu dhakhsiyaha badan diyaar u noqon doono. Warbaahinta dawladda ayaa sheegaysa in gantaalada Hwasong-12 ay ka gudbi doonaan Jaban kuna dhici doonan badda meel qiyaastii 30 km u jirta Guam, haddii uu qorshahan ogolaado Madaxweyne Kim Jong-un. Qalabkan aad...